၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း လက်ပံတောင်းဒေသခံများ ဆန္ဒပြမှုတခုတွင် ရဲနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေစဉ် / ဧရာဝတီ
By မိုးမိုး7March 2020
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သိမ်းဆည်းခံ မြေယာ လျော်ကြေးများ ပိုမိုရရှိရန် လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စား လှယ် တဦးက တောင်းဆိုရာ တိုးပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒု ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်နွယ်က“နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ အကြီးမားဆုံး စီမံကိန်းလည်း ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတော် အစိုးရမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီမှာ တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
မတ်လ ၆ ရက်က နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း မြေယာ လျော်ကြေး အတွက် ၁ ဧကကို ကျပ် သိန်း ၁၉၀ နှုန်း ရရှိရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၅ မှ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်၏ ဒေသခံများ ကိုယ်စား မေးမြန်းမှုအား ဗိုလ်ချုပ် မြင့်နွယ်က ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးရဲထွဋ်က“၂၀၁၃ အစလျော်တုန်းက ဈေးနည်းတယ်။ ၁ ဧကကို ၁၀ သိန်းကစပြီး သိန်း ၂၀ အထိပေါ့။ အစားစား ပေး ခဲ့တယ်။ သိန်း ၁၉၀ တောင်းတာကို တိုးပေးရင် အခြားလျော်ကြေး ယူပြီးသား တောင်သူတွေက လျော်ကြေး တိုး တောင်းမယ် ဆိုပြီး ဒီသဘော ပြောသွားတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို တပ်မတော်ပိုင် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် (MEHL) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ စ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်း လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ သတ္တုတွင်း စီမံကိန်းမြေ အတွက် မြေ ၇၈၆၇. ၇၈ ဧကတွင် ဓာတ်သတ္တု အကြီးစား တူးဖော် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
MEHL သည် တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်ပေါင် သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ (Wanbao Mining Limited) နှင့် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေ ခံစားသည့် စနစ် (Production Sharing Contract) စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး ယင်းစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုကြေးနီ စီမံကိန်းအတွက် စလင်းကြီးမြို့နယ်မှ မြေသိမ်းခံတောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်စန်းနွဲ့က“ကျမတို့ ခြံစည်းရိုး ဘေးတင် ဝယ်နေတာက သိန်း ၁၉၀၊ ၂၀၀ နဲ့ ဝယ်နေကြတာ။ အမေစု စုံကော်ထဲမှာ ပါတာကလည်း လက်ရှိ ကာလ ပေါက်ဈေးထက် မနည်းတဲ့ နှုန်းပေးရမယ် ဆိုတော့ လက်ရှိ ပေါက်ဈေးအတိုင်းကို ပေးဖို့ ၁ ဧက ၁၉၀ ပေးဖို့ တောင်း တာပါ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းစီမံကိန်းစတင်သည့် ကာလက ၁ ဧက ကျပ် ၁၈ သိန်းနှုန်းဖြင့် ထုတ်ယူသည့်တောင်သူများ ရှိသကဲ့သို့ ယခု အချိန် အထိ ထုတ်ယူခြင်း မရှိသည့် တောင်သူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ရှိသေးကြောင်း၊ ယင်းတောင်သူများသည် နစ်နာမှု များစွာ ရှိသဖြင့် ယခုပေါက်ဈေး အတိုင်း တောင်းခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေါ်စန်းနွဲ့က ပြောဆိုသည်။
ထိုစီမံကိန်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတွက် ထိုအချိန်က အတိုက်အခံပါတီ ဖြစ်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်း၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က အပြီးသတ် အစီရင် ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုစီမံကိန်း သိမ်းဆည်း မြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးခဲ့သော်လည်း လက်ပံတောင်းဒေသ အတွင်းရှိ ဝက်မှေး၊ ဇီးတော၊ ဆည်တဲ၊ မိုးကြိုးပြင်၊ တုံတော ကျေးရွာ ဒေသများမှ တောင်သူများက မြေယာလျော်ကြေး မယူခဲ့ဘဲ အဆိုပါ စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရန် အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ သပိတ်စခန်းများ ဖွင့်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက မီးခိုးဗုံးများ၊ မျက်ရည်ယို ဗုံးများ၊ မီးသတ်ပိုက် များ သုံးကာ လူစုခွဲခဲ့သဖြင့် လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ၏ စာမျက်နှာ ၆၇၊ အပိုဒ် (၃)တွင် ဒေသခံများ ဆုံးရှုံးသွားသော လယ်ယာ မြေ များကို အစားပေးသည့် အနေဖြင့် ၎င်းရွာများဝန်းကျင်ရှိ မြေလွတ် မြေလပ် ဧက ၁၉၀၀ ခန့်အား စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် မြေ ဖြစ်ရန် ပြုပြင်ပေးပြီး ခွဲဝေပေးသင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပထမ အကြိမ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ အရ ဒုတိယ အကြိမ် အဖြစ် မြေယာ နစ်နာကြေး ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၁၈၈ သန်းကျော်အား ဒေသခံ တောင်သူများသို့ ၁၆.၃.၂၀၁၃ မှ ၁၈.၁၁. ၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ၇၉.၇၉ ရာခိုင်နှုန်း ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဒု ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်နွယ်က လွှတ်တော်သို့ ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင် ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီမှ ဒေသရှိ ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ သက်ကြီး ရွယ် အိုများနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်း တက်နေသည့် ကျောင်းသားများကို ထောက်ပံ့မှုများ ပေးနေကြောင်း၊ တတ်နိုင်သည့် အပိုင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် မြင့်နွယ်က ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခံစားသည့် စနစ်ဖြင့် စာချုပ်ချုပ် ဆို ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်အား နိုင်ငံတော်မှ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာဝမ်ပေါင်မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကျိုးအမြတ် ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဒေသခံများ အတွက် CRS (ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ) တွင် အကျိုးအမြတ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုသွားမည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ ကြောင်းလည်း ဒုဝန်ကြီးက ပြောဆိုသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်ကမူ ယခုအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ယင်းကိစ္စများကို အပြီးပြတ် ဖြေရှင်းပေးစေလို ကြောင်း၊ မြေပြင်ကွင်းဆင်းသည့် အခါတွင် သောက်ရသည့် ရေမှာ သန့်ရှင်းမှု မရှိသည့်အပြင် နေရသည့် အိမ်များမှာ လည်း ဓနိမိုး၊ ထရံကာများနှင့်သာ နေထိုင်ရသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ အခြားသော အလုပ်အကိုင်များလည်း များစွာ ထိခိုက်မှု ရှိနေကြောင်း ပြောသည်။
Topics: လက်ပံတောင်း ကြေးနီ စီမံကိန်း မြေယာ လျော်ကြေး